Malaamaltummaa Lammaa Afaan Dammaa! | Kichuu
Malaamaltummaa Lammaa Afaan Dammaa!
Posted on March 10, 2019 by fmegersa
Damee Boruutin, Bitootessa 10, 2019
Malaamaltummaan deemuun yaroo tokkoo fi lama laga nama ceesisuu ni danda’a taha. Garuu malaamaltummaa kaayyoo fi akeeka godhatanii ittii jireenya gageefachuun gonkuma hin danda’amu. Guyyaan sobni kun hundu saaxila bahameei qullaa dhaabbatanii qaaniin lafa irra harkifaman akka dhufuuf deemu hubachuu fi fudhachuun beekumsa.
Obbo Lammaa Magarsaa afaan isaa laafsee yaroo imimaan hin jirree boo’aa waa’ee rakkina Uummata Oromoo dubbachuu jalqabu afaan isaa keessaa waan dammi cophaa jiru fakkaata. Lakkoobsi Uummatni Oromoo afaan isaa kanan afaanfanjaa’u xiqqaa hin tahu. Hojii isaa yaroo agarru malee afaan isaa keessaa kan bahu nama hin quuqu. Hojiin isaa garuu waan inni jedhu wajjin wal hin madaalu, wal hin argus. Haasaan isaa fi hojiin isaa wal itti bu’aa fi wal dhiitaa deemu. Rakkina qabnu keessa tokko eenyummaa nama kana adda baafnee hubachuu dadhabuu dha.
Uummatni Oromoo yaroo tufattamee, tufamee irra deemamu yoo of hin agarree yaroon ulfina argatu hin jiru. Of itti qaana’u fi of itti gadduu beekuun dandeettii barbaachisa. Yoo kana hin taane yaroodhuma ibiddi miila keenyatti qabatu gadi baanee iyyina. Yaroo bishaan nutti facaasan ol deebinee rafuun rakkina garbummaaf hiikaa hin tahu.
Obbo Lammaan erga Prezedaantii MNO tahee kaase salphina, badii fi dhumaatii Uummata Oromoo irratti raawwatame irra deebi’ee kaasuun na balaqamsisa. Yaroo hammeenyi kun hunduu uummata nagaa irratti akeekatamee deemaa jiru Obbo Lammaan akkuma amala isaa boo’aa jira. “Team Lammaa” jedhamee beekamtii guddaa warra Habashaa biratti argachuudhaan akka jijjirama dhufaa jira jedhamuuf hoogganaa taheeti gara waggaa tokkoo farsamaa tureera.
“Itoophiyaan suusii” dha waan jedheef warra Impaayeera Itoophiyaa tiksuu barbaadan biratti mataa irratii baatamaa ture. Kononeel Abiyiif bakka Muumicha Ministeerumaa gadhiisuun isaa biyya ijaaruuf malee aangoo barbaachaa miti kan deemaa jiru akka jennu nu godhee jira. Kononeel Abiyi immoo gaafa muudamu kaayyoo Minilki bakkaan gahuuf hawwii akka qabu waan kaaseef Habashoonni waan “Team Lammaa” jedhamu kana akka dhunfaa isaanii qofa tahe godhanii fudhatanii turan.
Kanaafuu waan Oromoo jedhuu fi maqaa Oromoo qabu akka badu gochuuf “Team Lammaa” kana meeshaa godhatanii nu irratti boba’an. Suuta suuta masaraa Minilki harkaa baafachaa ABO fi WBO lafa irraa duguganii balleessuuf shira xaxuu eegalan. “Team Lammaan” hawwii isaanii kan bakkaan gahuuf baayyee tattaafachaa turan. Har’as itti jiru. Haa tahu malee waan barbaadan kana salphaatti argachuun fagoo jira. Dammaqinsi Uummata Oromoo akka isaan tufatan miti. Uummatni Oromoo Abbaa biyyummaa Oromiyaa utuu hin arganne akka rakkina keessaa hin baane ni beeka.
Warri afaan mi’aa’u kun ijoollee koo jedhee waan fudhatee gara ifaa na baasu laataa jedhee eegachaa jira. Garuu isaan akka dukkana caalutti isa ofaa jiran suuta suuta hubachaa fi yaada naannefachaa jira. Guyyaa nu gahee isaaniin jedhu fagoo hin tahu. Amhaarri waggaa soddoma booda deebi’ee mataa Uummata Oromoo irratti akka fincaa’uu kan gochaa jiru hojii isaanii ti. Gaafa isaan waa’ee Oromoo sagalee tokko dubbatan “Team Lammaan” nu ganee jira jedhee Amhaarri iyyaa oola.
Waan baayyee na gadisiisu warri Amhaara biyyi Oromiyaa fi magaalli Finfinnee jedhamu hin jiru jechuu isaanii miti. Isaan jedhan jechuu baatan biyya keenya irratti kan murteessuu danda’u uummata keenya duwwaa dha. Gaddi koo inni guddaan qotee bulaan Oromoo naannoo Finfinnee jiraatu lafa isaa buqqa’ee akka iyyumaaf saaxilmu kan gochaa turees, kan gochaa jirus OPDO dha. Yaroo fooqiin dilli kun hunduu lafa Oromoo saamame irratti ijaarmu MNO achuma jira. Master pilaniin kuma shanii ol ilmaan Oromoo itti dhuman sammuu keenya keessatti dhaabbate malee hojiin lafa irratti mul’achuu irraa hin dhaabbanne. Iyyaa oollee “dhaabbatee jira” yaroo nuun jedhan gara golaa deebina. Dhaabbachuu isaaf raga tokko illee hin qabnu.
Gowwumaan keenya gaafa fooqii kana Habashaaf hiruuf jedhuu dhageenyu iyyinee manaa yaana. Gaafa isaan ijaaraa turan maal hojjechaa jira? Obbolaan keenya qananiin lafa isaanii irraa buqqa’anii yaroo jireenya gadadoo jiraatan ilaalaa hin jirruu? “Amma daangaa sararuuf jenna galaa” yaroo nuun jedhan eegee keenya lukka jidduu keewwatne gara manaa deebina. Boru gaafa fooqiin hiramee dhumu immoo deebinee iyyuuf teenya. Yaa uummata koo ormi daangaa keenya nuuf sararuuf lafa keenya irraa kutee nuuf keennuuf mirga qabu. Abbaan biyyaa Oromoo dha jechaa amma hunda keenya Oromiyaa irraa buqqisanii nu darban eegaa jirraa?
Obbo Lammaa yoo dhugaa “team Lammaa” kan jedhamu kana qabaate illee nu gahe jaruma wajjin ulfinaan nu irraa deemi. Akka Abaayi Walduu TPLF, akka Dassuu SNNP, akka Daguu Indargaachoo ANDM, atis karaa nagaa deemi. Yoo dide tuffii uummata Oromoo kana kan itti fuftu tahe akka saree lafa irraa si gototee si gatuuf uummtni kun qophee qaba. Malaamatummaan dhali nama ilmaan leencaa qabee godoo sibilaa keessa bakka bineesa eegan (zoo) ka’ee itti gammada. Atis leenca ilmaan Oromoo, gootota WBO, malaamaltummaan dagala keessa baafatee dalaa Xolayyii keessa keese Habashoota do’achiisaa jiraachuun gocha keessa isa dhumaa tahuu qaba.
Wagaa digdamii torbaan darban ilmaan Oromoo hidhaa, ajjeessaa, qaama hirisaa, mana hidhaa keessatti tortorsaa fi saamaa kan ture OPDO dha. TPLF mataa irraa teesse hoogganaa haa taatu malee hojii isa fokkisaa fi yakkamaa kan hojjechaa ture OPDO dha. OPDOn dhaabba haqa Uummata Oromoo eegauuf ijaarame miti. Kanaafuu dantaa ofii tikfachuu malee waa’ee Uummat Oromoo dhimma tokko illee hin qabdu. Waggaa tokko as immoo adda duraan kan Uummata oromoo fixaa fi daraaraa jiru OPDO dha. Uummatni Oromoo OPDO hudduu ishee qabee of irraa buqqisuu malee waan dhiifamuu godhuuf sababni tokko hin jiru.
Biyya Impaayeera Itoophiyaa har’a jiru kana keessatti of danda’anii mirga hiree ofii ofiin murteefachuu qofatu karaa qajeelaa dha. Karaa biraa akka abashaan bara baraan nu irratti sirbituu fi dhiiga ilmaan keenya sooraa jiraannu nu godha. Kana booda Impaayera Itoophiyyaa akka kana duraa walitti cafaqqeen bulcha jedhee kan yaadu abjuu qofa akka tahe beekuu qaba. Jala murree kan beekuu qabnu Uummatni Oromoo Abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti eenyu wajjin iyyuu araaraf akka hin teenye dha!
Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu
Magaala Maqalee Immoo Tulluu Walalitu Lammaa fi Abiyii Itti Dhiyaata?
Kononel Mangistuu Amma Kononel Abiyi
This entry was posted in News by fmegersa. Bookmark the permalink.